Mareykanka oo diiradda saaraya carqaladeynta dhaqaalaha ee kooxda Al-Shabaab. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Mareykanka oo diiradda saaraya carqaladeynta dhaqaalaha ee kooxda Al-Shabaab.
Mareykanka oo diiradda saaraya carqaladeynta dhaqaalaha ee kooxda Al-Shabaab.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay si xoogan u taageerayaan dadaalada lagu carqaladeynayo hababka dhaqaale iyo maalgalinta sharci darada ah ee ay adeegsadaan kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab.
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa lagu waramay in ay diiradda saarayaan warbixinadii ugu dambeeyay ee ay soo gudbiyeen guddiga khubarada iyo sida wax looga qaban karo saameynta dagaalada kooxaha argagxisada ee aan ku ekeyn Soomaaliya,balse u gudbay dalalka deriska ah .
Previous articleDowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay aflagaadadii lagula kacay Suubanaheena CSW.
Next articleDadka Mareykanka oo looga digay weeraro argagixiso oo ka dhici kara dalalka Khaliijka.